China T-bolt clamp Mugadziri uye Mafekitori | Glorex
T-bolt clamp imhando yemupendero unoshandiswa wakakoshwa silicone tube kuiswa chisimbiso. Iyo bandwidth yazvino isu tine: 19, 20, 26, 32, 38.
T-bolt clamp inopa yakavimbika uye yakavimbika kuiswa chisimbiso neyunifomu uye yakagadzika chisimbiso kumanikidza uye nekunaka kwakasimba.
Iyo yakajairika kurongedzwa ibhegi repurasitiki, uye bhokisi rekunze iri bhokisi.Iri pane chinyorwa pane bhokisi.Special packing (pachena chena bhokisi, kraft bhokisi, ruvara bhokisi, purasitiki bhokisi, nezvimwewo)
T-bolt clamp inonyanya kushandiswa mukukwirira-vibration uye hombe-denderedzwa ma application seyakaorema rori, indasitiri, mota, kudiridza kwekurima uye michina.
T-bolt clamps inoshandisa zvivakwa zvakasiyana uye zvigadzirwa zvekugadzira kuti zvisangane nezvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzehoses nemapombi esimbi. Ivo vane yakakwirira yakazara simba, nyore kushandisa uye yakasimba kukurumidza simba.
Yepfuura: Chitubu hose clamp
Inotevera: Uniaural isina-polar hose clamp